गजल:- खेलौना पो रै छु (२०७४ आषाढ ३०, शुक्रवार)
हरी गौतम (अर्घाखाची )
म वुटवल पुग्छु भन्दा, भन्छेउ पाल्पा गै,छु..!!
थाह थियन त्यो नजरमा, खेलौना पो रै,छु..!!
मूटु झीकि..मान्छे वेच्ने, व्यापार गर्छउ र की?"
भन्छेउ अरे दुनीयालाई, उ गलत म सै,छु..!!
चोखो माँया लत्तायर, धनको पछी लाग्दा."
भन्नु पर्ला कुनै दीन, पछुताउने भै,छु..!!
सुनै सुनको महल होश् या, हीरा चाँदी मोती."
रित्तै आथ्यौं रित्तै जान्छ्यौं, भन्दीनउ केही लै,छु..!!
माँया होश या घृणा मलाई, जे-जे गरेपनी."
तिम्लाई केही पर्यो भने, अघी सर्ने मै छु..!!
[[२" म वुटवल पुग्छु भन्दा, भन्छेउ पाल्पा गै,छु.!!
थाह थिएन त्यो नजरमा, खेलौना पो रै,छु..२"]]